Taageerayaasha xisbiga kulmiye oo maanta isugu soo baxay fagaaraha beerta xorriyada ee Hargeysa - BBC News Somali
Taageerayaasha xisbiga kulmiye oo maanta isugu soo baxay fagaaraha beerta xorriyada ee Hargeysa
Taageerayaasha xisbiga talada haya ee Somaliland ee kulmiye ayaa maanta cududoodu ku muujiyay iyagoo kumanaan ah fagaaraha beerta xorriyada ee Hargeysa iyadoo ololaha xisbiyadu uu galay maalintiisii labaad.
Taageerayaasha kulmiye ayaa lulayay calanka xisbiga iyo sawirada murashaxiinta iyagoo ku dhawaaqayay halkudhegyo ay ku muujinayeen taageeradooda, iyadoo uu kala qayb galay murashaxa madaxweynaha Muuse Biixi Cabdi iyo madax kale . Sidoo kale fagaaraha khayriyada ee Burco waxaa dadweynaha kala qayb galay madaxweynaha Somaliland Axmed siilaanyo oo isagu aasaasay xisbiga kulmiye .
Haddaba xamaasadii fagaaraha beerta xorriyada ee Hargeysa iyo guud ahaan ololihii maanta ee taageerayaasha xisbiga kulmiye waxaa warbixintan nooga soo diray weriyaha BBC-da ee Hargeysa Axmed saciid Cige
Maqal Guddiga doorashada ee Jubaland ma yahay mid madax-banaan oo dhexdhexaad ah?
Guddiga doorashada ee Jubaland ma yahay mid madax-banaan oo dhexdhexaad ah?
Maqal Baafinta 23 June
Baafinta 23 June
Maqal Baafinta 27 June
Baafinta 27 June
Maqal Baafinta 26 June
Baafinta 26 June
Maqal Baafinta 25 June
Baafinta 25 June
Maqal Baafinta 24 June
Baafinta 24 June